[नियात्रा] घलेगाउँको सिं थेवा – पोष चापागाई | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
[नियात्रा] घलेगाउँको सिं थेवा – पोष चापागाई
२०७४ पौष १५, शनिबार १०:०९ am | आजको पत्रिका
हामी बन्दीपुर बजारबाट घलेगाउँ, लमजुङको होमस्टेमा बासबस्न जान गाडीमा बस्यौं । बन्दीपुर –बेशीसहर नौं कि.मी. । त्यो पनि ठाडो ओरालो पीच । एकै छिनमा झर्यौं । पुग्यौं ।
हामी यतिबेला डुम्रेबाट बेशीसहरतिर जाँदैछौं । बाटो कति छ कसैलाई थाहा छैन ।
तेर्सो पीच सडकतिर लाग्यौं । सधैँ आउजाउ गरिरहेको हाइवे छुट्यो । यही होइन बेसीसहर जाने सडक ? – म
हो, नछोडि जानुस् यो बाटो । ठ्याक्कै बेसीसहर पुगिन्छ । – उ ।
कुदाइ्न गाडी रश्मीले बेस्सरी । डर डर पो लाग्छ । के उधिँ कुदाको ! म झ्यालबाट बाहिर हेर्न थालें । राम्रा घर आए । थोत्रा घर आए । गाउँले घर आए । बारी आयो । खेत आयो । हेर्दा हेर्दै मख्ख परेर भनें – औधि राम्रो पो रहेछ यता । धेरै धान फल्छ होला । कति सुकिला घर । कति मलिलो माटो ।
लाहुरेहरुको बस्ती हो, यो । जहाँ पायो त्यहीँ किन बस्थे पैसावाला लाहुरेहरु । पक्कै राम्रो ठाउँ होला – भन्नु भयो । नारायणजीले ।
त्यो जंगल भित्र भोटेओडार छ । एकपटक पुगेथेँ । कहाँ निर हो बिर्सिएँ । नारायणजीले भन्नुभयो ।
मैले त्यता हेरेँ । रोड अनि खेत । खेत माथि वन । लहलह रुख । साँच्चै घनघच्चीको पो देखेँ त गुफा वरपरको वन ।
जाँदा जाँदै एउटा गेट आयो सडकमा । यही होला बेसीसहर ठान्यौं । होइन रहेछ । त्यहाँबाट पनि निकै बेर हिडेपछि हामी बेसीसहर भित्र पस्यौं ।
घले गाउँ जाने गाडी कति बजे जान्छ ? – म ।
एघार, बाह्र बजेतिर । – उ ।
हामी बसिरह्यौं । गाडी सुतिरह्यो । बस्ने र सुत्नेको बल्ल कुरा मिल्यो । दुई बजेतिर हामी फोरहिल, भाडाको गाडी चढेर घले गाउँतिर लाग्यौं ।
कता गयौं कता । कता जाँदैछौ ? मन मुर्मुरिन्छ । कहिल्यै नपुगेको ठाममा के–के न होला । उपदै्र पो होला जस्तो लाग्छ मनमा ।
के हुनु नि नौलो । पाखो । पहरो । जंगल । घारी उनिउको । वनमारा । पर– तल खेत । खेतका गरामा परालको माच । माच नजिकै चर्दै बस्तु भाउ । घुम्दै कतै वा कतै नानीहरु । यस्तै त हो नेपाली जीवन ।
उकालामा बाटो छ धुले । बाटोमा हामी हिड्दैछौं गाडीमा बसेर । सीट टन्न छ । गाडीको झ्याल बन्द गरेपनि जिउभरी ह्वार्रै धुलो पस्छ । हामी बीचमा छौं । पछाडि बैंस भरिएका । पानी भरिएका तरुनी तन्नेरी बसेका छन् । उनीहरु खितिती हाँस्छन् । गलल हाँस्छन् । गीत गाउँछन् ।
बुढेसकाल मक्किएको पात्लेको रुख हो । ढल्न के बेर ।
मलाई तरुनी, तन्नेरीको रोमान्स पटक्कै मन पर्दैन ।
पर डाँडो । माथि पहरो । पर पाखो । बीचमा बाटो । बाटामा धुलाको भकारीका भकारी । खुइते गाडी थतर्काउदै हामीलाई कुदाइरहेको छ ।
म थर्किन्न । थर्किन्छु तर थर्किन्न । किनभने जीवन सुखमय मात्रै हुन्न । थर्काउँछ । थर्किन सक्नुपर्छ ।
यो बाटो कति कि.मि. छ भाइ – म
३२ कि.मि. छ । उ (ड्राइभर)
रापा सिं भन्ने ठाउँमा कान्छा दाइले गाडी रोक्दै भन्यो – जानुस्, जानुछ भने जंगलतिर । म एक छिन बस्छु ।
जानु थियो । गएँ । गयौं । तर बिचराले हिमाल हेर्नुस् भन्न बिर्सिएछ । वा हिमालको महत्व नै उसलाई थाहा थिएन ।
चउरमा उभिएर हेर्दा त हातैले छोइएला जस्तो देखिदो रहेछ हिमाल । हिमपुञ्ज शुभ्र । दिग्दिगन्तको अद्वितीय सौन्दर्य पुञ्ज । मान्छेको ख्याती जस्तो सेतो हिमाल ।
कति हेर्नु । हेर्दा हेर्दा आँखा थाके । हेरेर पेट भरिन्न । चिया, सिया खाने व्यवस्था छ कि भनेर हेरेँ । छैन । खाएनौं । मात्रै दृश्य सुघ्यौं ।
यो हिमाललाई के भन्छन् ? म
अन्नपूर्ण १, २, ३, ४ कुन हो त्यो चै था भएन बा । उसले भन्यो ।
हिड्यौं । नजिकै अलि माथि सरस्वती प्रा.वि. भवन रहेछ । त्यहाँबाट पनि मज्जाले देखिदो रहेछ सेतै कपाल फुलेको बूढो हिमाल ।
यो उकालो । यो वन । यो बाटो । यी पाखा । यी डाँडा काँडा सबै मेरै दिङ्लाका त हुन् नि जस्तो लाग्यो मनमा । कताबाट आयो कुन्नि दिङ्ला । उस्तै लुगा लाएकी अर्काकी स्वास्नी देखेर आफ्नै आफ्नी ठान्ने बूढो त भइनँ म ।
सहस्र वन्दना उकालालाई । होइन, उकालाको मलयज शीतलाम् वायुलाई मैले मनै मन वन्दना गरेँ ।
हामी घले गाउँ पुग्दा त्यस्तै चार बजेको हुनुपर्छ ।
बेँसीसहरबाट घलेगाउँ आइपुग्न गाडीमा कति समय लाग्छ भाइ ? – म
दुई घण्टा लाग्छ । – उ
हामी होमस्टे खोज्नतिर लाग्यौं ।
आज होइन । एक वर्ष अघिदेखि लमजुङको होमस्टेमा बस्न जाने भनेका थियौँ । त्यहाँको सम्पर्क पुरुषसँग आउने बेला दिनैपिच्छे सम्पर्क गरेका थियौँ । उसँग आजै पनि गाडी चढ्ने बेला सम्पर्क भएको थियो तर ।
उ आयो होमस्टेवाला ।
लुरुलुरु हामी उसको पछि लाग्यौँ । उसले दाल भात अघाँउन्जी खुवायो । सागको तर्कारी दुई त्यान्द्रा । थप्ने तर्कारी छैन । उठ्यौं । चुठ्यौं ।
होमस्टे घर ?
हेर्नुस् । लग्यो । हेर्यौं । मन परेन कोठा । ह्वास्स गनायो ।
यसो माथि हेरेको त त्यहाँ त सहरको जस्तै होटल रहेछ । होटलमुनि बसेर खाएछौँ । नाम होमस्टे काम होटल । 'चौक्टा खान आएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी' भयो ।
जर्किदै त्यहाँको व्यवस्थापक भाइले अरु घर देखायो । धेरैवटा घर हेरेपछि एउटा घर छान्यौं । आजरात त्यसैमा बस्ने निधो गरेर झोला कोठामा थन्क्यायौँ । अनि घुम्न निस्कियौँ ।
घलेगाउँ होमस्टे ८ बाट बाहिर निस्कियौँ । तल, माथि, वरपर सबैतिर ढुङ्गा छापेको छ भुइँमा । ए है ए है ! दिङ्ला पुगे जस्तो पो लाग्छ । वहाँ मेरोमा घर आँगनमा कसैकसैले ढुङ्गा छापेको हुन्थ्यो । यहाँ त जताततै ढुङ्गा ओछ्याएको देखिन्छ ।
घरहरु स–साना लाग्छन् । प्रायः २ तले । माथि टिनले छाएका छन् । सबै घर । टिनका छानामा मूलाको, रायोको, तोरीको साग सुकाएको देखिन्छ । गुन्द्रुक बनाउन सुकाएको रे ! सबै घरका टिनमा कालो घसेको जस्तो लाग्छ । पुराना भएर होला । यी घर झुरुम्म तर छुट्टाछुटै अस्तित्वमा उभिएका छन् । एक दुई घर बाहेक कुनै घरको पनि करेसावारी छैन । सबैको खेती तल बेँसीमा छ रे !
गयौँ । गइरह्यौँ ढुङ्गामा टेक्दै । बाटोमा १ जना पनि गाउँले भेटिएन । डाँडामा बाटो । पर्खाल । एकातिर लेखेको पढेँ – 'पर्यटन व्यवस्थापन समिति, ग्रामीण पर्यटन घले गाउँ लम्जुङ ।'
यो लेखेको बोर्डमा घर छ । आँगन छ । पर्खाल छ । पानी छ । शुन्य छ । अर्कोतिर पढेँ –
'समादरणीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूका बरद बाहुलीबाट उत्तरकन्या २ घलेगाउँ लम्जुङ स्थित सार्क भिलेज पर्यटन सङ्ग्रहालयको मिति ०७३ माघ २२ गते समुद्घाटन सुसम्पन्न भयो ।'
कता जाने कता । थाहै छैन । मान्छे भेटिन्न । कसलाई सोध्न जाने हो ? भन्दै तेर्सै तेर्सै गयौँ । ओरालो आयो । तल झर्यौं । त्यहाँ मन्दिर रहेछ । नजिकै गयौं । मन्दिरको ढोका बन्द रहेछ । त्यहाँ लेखेको पढेँ – 'उत्तरकन्या मन्दिर ।'
मन्दिरको ठीक अगाडि मन्दिरजस्तै अर्को भवन देख्यौँ । म त्यहाँ गएर के लेखेको रहेछ भनेर पढ्न खोजेँ । त्यहाँ लेखेको भाषा बुझिनँ ।
तेर्सै तेर्सै जाँदैछौँ । चिया बगान छ भन्थेँ कता होला ? मेरो मनले मलाई सोध्यो । त्यति नै बेला बाटो मुनि चियाका बुट्टा देख्यौँ । म दङ्ग । उ चियावारी ।
किन दङ्ग पर्नु भएको ? इलामको चियावारी जति ठूलो पक्कै छैन क्यारे । मैले भनेँ – पछि ठूलो चियावारी हुन सक्छ नि ।
दोबाटो आयो । ओरालो कि उकालो ? अलमलियौँ ।
होमस्टेमा जानु छ । बाटो बिर्सियो । कताबाट जाने होला ? मैले घरपट्टिलाई बोलाएर सोधेँ ।
उसले भन्यो घर नं. कतिमा बस्नु भएको छ ? आठमा ।
उसो भए त्यताबाट जानुस् । उसले देखायो ।
अस्ताउन आँटे घाम । खुट्टा निहुँ खोज्न थाले मेरा । हतार हतार आठ नम्बर घर भित्र पस्यौँ ।
अगेनामा आगो बल्दैछ । बुहारी नानी तर्कारी पकाउँदैछिन् । एक कुनामा आगो ताप्दै घरपट्टि बा कोदाको झोल पिउँदैछन् । नजिकै आँटमा राखेको मासु झिकेर काटकुट गर्दैछन् छोरा । पुत्पुत् धुँवा घुम्दैछ । अगेनो नजिकै ओछ्याएको सुकुलमा बसेर आगो ताप्दैछौँ हामी । हामीलाई पनि मूला दिनुस् न नानी ! – मैले भनेँ । उनले प्लेटमा राखेर चारपाँच चाना दिइन् ।
घरपटि बालाई सोधेँ – आमै खोइ त ?
उनले भने – पोखरा बहिनीकोमा गएकी छे । आइपुग्ने बेला भो ।
एकैछिनमा दुई महिला भित्र पसे । एउटी अलि बुढी । अर्की अलि तरुनी । बा दङ्ग पर्दै यसो पो भनें – 'यी दुईटी मेरी श्रीमतीहरु हुन् । एउटी जेठी । अर्की कान्छी । कान्छीले त मलाई बेस्मारी पो माया गर्छे त । कसो हो ? हो कि होइन ?'
झोला बिसाउँदै उनले भनिन् – 'हो त नि । म त आफ्नो भेनालाई असाध्यै माया गर्छु ।'
फेरि उनले भने – 'भेना नभन न । पोइ भन न, पोइ ।' साली भेनाको गफ रमाइलो थियो ।
एक गिलास लिनुहुन्छ । कोदाको हो ।
कति पाने हो नि ?
के को पाने ? ७÷८ पाने कति हो । लाग्दैन ।
'हुन्छ दिनुस्' एक गिलास भनें ।
दिए । खाएँ । के को लाग्नु । पानी पिए जस्तै भो ।
मज्जाले खाइ पिई गरेर अर्को घरमा सुत्न गयौं । मस्त निद्रा लाग्यो । रात भरी जाडोले सेक्छ होला भन्ने लागेको थियो ठ्याम्मै जाडो भएन । चार बज्यो बिहान । उठेँ । वाथरुम बाहिर । पर । चिसो । अध्यारो । गएँ । त्यहाँ बत्ती बलिरहेको रहेछ । काम सकेँ । फर्किएँ । बाटामा बेस्मारी भकुर्यो चिसोले ।
योग गरे जस्तो गरेँ । उज्यालो भयो । म एक छिन घुमेर आउँछु भनेर निस्किएँ । कता जाने कता । बेलुका हिडेकै बाटो आएँ । अलि पर दाउराको ठूलो कुनिउ रहेछ । त्यहीबाट एक जना गुरुङ बा उता जाँदै थिए । सोधेँ –
दाउराको त्यो (औलाले देखाएर) थुप्रोलाई के भन्नुहुन्छ ?
उसले भन्यो – हामी दाउरालाई सिं भन्छौँ । सिं थेवा ख भनेको दाउराको माच छ भनेको हो । बुझ्नु भयो ?
उ गयो । म हिडेँ । माथि उभिएर तलका टिन छाने घरतिर हेरेँ । बारी नभएका घर । आँगनमा फूलहरु फुलेका देखिन्थे । प्रत्येक घरको धुरीमा धुवाँ उडिरहेको थियो ।
नानी पधेँरामा साडी निचोर्दै थिइन् । सोधेँ – गाउँमा कति धारा छन् ?
पाँच छ वटा ।
पानी कति आउँछ ?
फर्किएँ कोठामा । साथीहरु उठिसक्नु भएको रहेछ ।
सूर्योदय हेर्न जाने होइन ?
हतार हतार कोठाबाट निस्कियौँ । खुत्रुक खुत्रुक झर्यौं । गेट आयो । गेटमा लेखेको रहेछ – गोर्खा पार्क । हामी पुग्दा सूर्य उदाइ वरी संसार भ्रमणमा निस्किइसकेका रहेछन् । अब हेर्ने भनेको हिमाल । फोटा खिच्ने भनेको हिमाल । रिल्याक्स गर्ने भनेको हिमाल । हिमाल हेरेँ मैले ।
सेतो हिमाल त कालो पो देखेँ । किन कालो हिमाल ? खोइ हिउँ ? नारायणजीले भन्नुभयो 'यो सबै पर्यावरणको लीला हो । त्यहाँ हिउँ छैन । कालो ढुङ्गो मात्रै छ ।' मैले भनेँ – ए हो र ?
हिउँ । हिमाल । म । हामीहरु । सबैको अस्तित्व छुट्टा छुट्टैछ । त्यहाँको भ्यूटावर माथि चढेर पर्यटकहरु आफ्नो मात्रै अस्तित्व खोज्दै छन् । संसारमा अरु नै छैनन् जस्तो ।
पर देखिन्छ कालो अनि सेतो हिमाल । तल तल धेरै तल छ खोँच । फोटा खिचिसकेपछि, हेरिसकेपछि, संसारका कष्ट पीडा बिर्सिसकेपछि हामी त्यहाँबाट तल झरेर बस्ती भित्र पस्यौं ।
जाउँ ८ नं को घरमा भनेँ । हुन्छ भन्नु भयो उहाँहरुले ।
आफ्नो घर । होमस्टे घर । एक वर्षदेखि आउन खोजेका गाउँको आफ्नै घरभित्र पस्यौं ।
भान्सा भित्र पसेर तातो पानी मागेँ । आमाले दिनुभयो । मेरी आमाले दिङ्लामा अङ्खोरामा पानी दिएको झझल्को आयो । आटको गाग्रीबाट झिकेर । नस्ता के गर्नुहुन्छ ? आमाले सोध्नुभयो ?
जे–जे छ त्यही – मैले भनेँ ।
खानेकुरा आयो । खान थाल्यौँ । कोदाको सेल रोटी मलाई औधि मन पर्यो । निख्खुर कालो, चिल्लो, गुलियो ।
फेरि कोठा भित्र पस्यौं । तयारी गर्यौं हिड्न ।
कोठा बाहिर निस्किदा त आँगनमा सासु बुहारी सेता अक्षता र फूलको माला लिएर उभिनु भएको रहेछ ।
सेता अक्षता र माला हामी प्रत्येकलाई आमाले लगाइदिनुभयो । मेरी आमाले म घरबाट बाहिर जाँदा मेरो निधारमा एक हातले राता अक्षता लाइदिनुहुन्थ्यो ।
आज घले गाउँ ८ नं घरकी गुरुङ आमाले सेता अक्षता दुई हातले एकै पटक लाइदिनुभयो मलाई । आमाले लाइदिए जस्तै लाग्यो ।
सेता अक्षता राता, दुई हात – एक हात, गुरुङ आमालाई आमा सम्झेँ । झोला बोक्यौँ, दुई हात जोडेर विदा माग्यौँ । उहाँहरुले पनि आधा ढाड झुकाएर, आउँदै गर्नुस् । यस्तै छ हाम्रो गाउँ भनेर हामीलाई विदा दिनुभयो ।
बाटो लाग्यौँ । गाडी पार्क गर्ने ठाउँमा पुगेर झोला बिसायौँ । कहिले जान्छ गाडी ? यो पहिले जाने हो ?
हो, यही पहिले जान्छ तर एकबजे तिर मात्रै हामी बेँसीसहरतिर लाग्छौं । लौजा मार्यो । भर्खर आठ बज्दैछ । पर्खिनु बाहेक हामीसँग अरु के छ र उपाय ।
म एक्लै घुम्न निस्किएँ ।
अलि पर पुगेँ म । त्यहाँ सानु सालिक देखेँ । त्यसलाई पर्खालले घेरेको रहेछ । भित्र जान मिलेन । फलामे गेटबाट हेरेँ । यस्तो लेखेको रहेछ । 'राजाल्के मुक्यालपो' (पाँचाको कोइम्लीको अन्तिम राजाको सालिक)
यता घुम्यो । उता घुम्यो । सकिन्न समय । कस्तो हो समय ? कहिले पुग्दै पुग्दैन समय, कहिले सकिदै सकिदैन ।
चिटिक्क राम्रो, स्कुल रहेछ पर डाँडामा । पढेँ – उत्तरकन्या प्रा.वि. ।
त्यसै स्कूल भित्र अर्को बोर्डिङ स्कूल पनि छ । प्रा.वि. पछि पढ्न एक घण्टा तल जानुपर्छ । भने एक जनाले हामीलाई ।
गाउँको बजार भित्र घुम्न थाल्यौँ । गाउँ तर बजार जस्तो लाग्ने । फाट्टफुट्ट यताउति पाइने ।
यहाँ गुन्द्रुक पाइन्छ ?
कहाँ बस्नु भएको छ ? त्यही सोध्नुभएन ।
ए, यसरी पो गाउँलेले गाउँको अस्तित्व संरक्षण गरेका रहेछन् । जस्तो लाग्यो मनमा ।
हामी पर्खालमा उपर्खुट्टि लाएर गफ भकुर्दै थियौँ । परबाट पन्ध्र, बीस जना गाउँले आमा बाहरु हातमा खरेटो कुचो लिएर बढार्दै आए । कोही बाटामा भएका प्लाष्टिक टिप्न थाले ।
मैले सोधेँ – दिनैपिच्छे यसरी नै बढार्नुहुन्छ ?
होइन, महिनामा एकदिन सबैजना मिलेर गाउँभरी बढार्छौं ।
गाडी करायो – जाऔं, जाऔं ।
हामी गाडीभित्र पस्यौं । घलेगाउँ गाउँ हो । मात्र गाउँ । के हुन्छ र गाउँमा । घर, खेतबारी, बाख्रा, पाठा, गाई, भैँसी । स्कुल, धनी मान्छे, गरीब मान्छे यस्तै ।
मन पर्यो घलेगाउँ । यो गाउँ आफ्नो स्तरोन्नति गर्न कस्सिएको देखेँ । झुरुम्म घर मात्रै भएको, खेतबारी पटक्कै नभएको, हिमाल सिराने बनाएर सुतेको, यो गाउँ धेरै वर्ष सुतिरह्यो होला । हिजो आज जुरुक्क जुरुक्क उठेको देखेँ । होमस्टे छ । अलिकति आय हुन्छ । सार्क पर्यटन स्थलको राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराए । प्रचार भयो । घर नं दिए होमस्टेको घर चिनियो । सबै घरलाई पुग्ने पानीको धारो बनाए गाउँलेले । मन्दिर निर्माण, चिया बगान, प्रगातिका द्योतक लाग्छन् । अचेल त सार्वजनिक भवनको आँगनमा बसेर कसरी गाउँको उन्नति गर्ने भन्दै दिनैपिच्छे जस्तो छलफल हुँदोरहेछ ।
हिमालको हिउँले पोलेर कठ्याङ्ग्रीएको, डामिएको घले गाउँ अब पर्यटक बोलाउने पूर्वाधार तयार गरेर जाडो मुक्त हुनेछ । गाउँलेहरु राम्रो आय हुनाले सुखी हुनेछन् तर सरकारले बेँसीसहरदेखि घले गाउँसम्मको सडकको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ ।
अन्नपूर्णा हिमालको हिउँ घलेगाउँका घर आँगनमा सुन बन्नेछ ।
(२०७४ मंसिर २९, घलेगाउँ, लमजुङ)